Galaxy သည် Sky Urban Space အသစ် တည်ဆောက်ရန် AlterVerse နှင့်ပူးပေါင်း ရန်စီစဉ် နေသည် - Pandaily
Jun 21, 2022, 17:48ညနေ 2022/06/22 08:49:10 Pandaily
Web3 အထောက်အထား များ ဒေတာ ကွန်ယက်Galaxy စီမံကိန်းသည် Meta-Universe AlterVerse စီမံကိန်း နှင့်ပူးပေါင်း သည်ဆုလာဘ် များ နှင့်ပါ ၀ င်မှု မဟာဗျူဟာ များ ဖန်တီး ရန် Sky City တွင် နေရာ အသစ် တစ်ခုဖန်တီး ပါ။
Galaxy စီမံကိန်း များသည် Web3 တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း များ တည်ဆောက်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ developer များနှင့် စီမံကိန်း များကို ကူညီရန် ပွင့်လင်း ။ ပူးပေါင်း သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ များ ပေါ် တွင်တည်ဆောက် ထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Web3 ၏အယူအဆ သည်အလွန် လူကြိုက်များ လာသောအခါ NFT များနှင့် ဂိမ်းကစား ခြင်း လုပ်ငန်းများ သည်ပထမ ဦး ဆုံး ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ပြီး NFT များနှင့် AlterVerse သည် ခြွင်းချက် မရှိပါ။ AlterVerse သည် Unreal Engine5ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော စွဲငြိ ဖွယ်ရာ နှင့် လုံးဝ ဗဟိုချုပ်ကိုင် မှုမရှိသော meta-cosmic ဂိမ်း အတွေ့အကြုံ ဖြစ်သည်။ ဤသည် မသိသော တိုင်းပြည် ဖြစ်ပြီး အဆုံးမဲ့ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ထားသော ဂိမ်း များနှင့် ကမ္ဘာ များနှင့် ပြည့်နှက် နေသည်။ ကစားသမား များ၊ streamers များ၊ တည်ဆောက် သူများ၊ ဖန်တီး သူများနှင့် အိမ်ရှင် များ သည်သူတို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို ငွ ေရှာ နိုင်သည်။
Galaxy Project မှ AlterVerse နှင့် အလုပ် လုပ်ရန် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းမှာ Sky City တွင် နေရာ တစ်ခုဖန်တီး ရန်ဖြစ်သည်။ Sky City တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေ များစွာရှိသည်။ မြေ ဝယ် ခြင်း၊ ဆောက် လုပ်ခြင်း၊ စျေးဝယ် ခြင်း၊ ပေါင်းသင်း ခြင်း၊ အရင်းအမြစ် များစုဆောင်း ခြင်း၊ NFT ပြုလုပ် ခြင်းနှင့်အခြား အရာ များဖြစ်သည်။ ကစားသမား များသည် ပစ္စည်း အသစ်များ ကိုရှာဖွေ တွေ့ ရှိနိုင် မည်၊ ရရှိနိုင်သည့် ဆု များကို စူးစမ်း လေ့လာပြီး ဆု များကို လဲလှယ် နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ အားလုံးသည် Sky City တွင် တိုက်ရိုက် ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Times နှင့် Sandbox တို့သည် Meta-Universe တွင် “Times Square” ကိုတည်ဆောက်ရန် ပူးပေါင်း ကြသည်
” ဂိမ္း ေလာကမွာ သံုးစြဲ သူေတြရဲ႕ ပါဝင္ မႈက အရာရာ ပါပဲ။ မကြာမီ စက်မှုလုပ်ငန်း စံ ဖြစ်လာ မည့် ဆုလာဘ် နှင့်ပါ ၀ င်မှု မဟာဗျူဟာ ကိုဖန်တီး ရန် Galaxy Project နှင့်ပူးပေါင်း ရန်ကျွန်ုပ် တို့ မစ ောင့် နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် Binance သည်သူတို့၏ launchboard တွင် Galaxy အစီအစဉ်ကို ကြေငြာ ခဲ့ပြီး ထိုနေ့ တွင်ပင် Binance သည် AlterVerse ကို စတုတ္ထ ရာသီ ပေါက်ဖွား ရေး အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င် သူအဖြစ် ကြေငြာခဲ့သည်။
Metajam: မင်း ယုံ တာ
ETH Shanghai Hackathon မီးလောင် သောအခါ Pandaily သည် MetaJam ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ လေး ဦး ဖြစ်သော Jean နှင့် Bob တို့ နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခဲ့ပြီး Web3 Rabbit Hole သို့ သူတို့၏ "Aha!" ကိုပြန်လည်သုံးသပ် ခဲ့သည်။ အခိုက်အတန့် နှင့် အနာဂတ် အတွက် သူတို့၏ အမြော်အမြင် ရှိသော်လည်း ရည်မှန်းချက် ကြီး သည့် မျှော်လင့်ချက် များ။
Web3 Jun 08 ဇွန် 8, 2022
Hurun သည်တရုတ် ၏အ လား အလာ အကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီများ စာရင်းကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
Hurun Research Institute သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် အလားအလာ အကောင်းဆုံး ဟု ယုံကြည် သော Meta-Universe ကုမ္ပဏီများ စာရင်းကို အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤ စာရင်းတွင် meta-cosmic နယ်ပယ်တွင် အလားအလာ အကောင်းဆုံး ရှိသော ထိပ်တန်း တရုတ် ကုမ္ပဏီ ၂၀၀ ပါဝင်သည်။
Web3 Jun 15 ဇွန် 15, 2022
မှော် ဧ ဒင် vs Opensea? ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို “သည်းခံ ပါ”
Okay Bear မြင့်တက် လာသည်နှင့်အမျှ Solana NFT စျေးကွက် သည် အရှိန် မြင့်တက် လာပြီး ETH အခြေစိုက် OpenSea သည်၎င်း၏ လွှမ်းမိုးမှု ကိုဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ရန်ကြိုးပမ်း နေပြီး လူတိုင်း အတွက် စျေးကွက် တစ်ခုဖြစ်လာ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Web3 May 29 မေ 29, 2022
တရုတ်ပြည်မကြီး ရှိ STEPN ဝန်ဆောင်မှု ကိုပိတ် လိုက် သည်
ကြာသပတေး နေ့တွင် STEPN ကွင်းဆက် ရှိ တရုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် အသိုင်းအဝိုင်း တွင် ကုမ္ပဏီသည် Mainland China မှထွက်ခွာ ရန် အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေ လိမ့်မည်ဟု ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ် ခဲ့သည်။ ည သန္းေခါင္ ေက်ာ္ ၿပီး မိနစ္ အနည္းငယ္ အၾကာမွာ ေသာၾကာေန႔ မနက္ အေစာပိုင္းက ဒီ ေကာလာဟလ ကို အတည္ျပဳ ခဲ့တာပါ။
Web3 May 27 မေ 29, 2022